भारतीय आमचुनाव :- पाकिस्तानी हेराई « Nepal Bahas
राहुल गान्धीले पछाडि बसेर गठबन्धनको रखवालीको भूमिका निर्वाह गरेको भए अनेकौं वरदान हासिल गर्न सक्थे
प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:२२
कसैले नरेन्द्र मोदीबारे उडन्ते विचार बनायो, यदि उनले स्वयंलाई फाँसी दिए भने पनि कांग्रेसलाई जति सिट मिल्नुपथ्र्यो त्योभन्दा ज्यादा मिल्ने थिएन । एक प्रधानमन्त्रीका लागि यसो भन्नु असभ्य कुरा होे, करिब त्यस्तै शब्दहरूका साथ जो मोदी आफैंले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान विरोधीहरू उपर हमला गर्नका लागि उपयोग गर्नुभएको छ ।
कतिपय मानिसहरूको भनाई के छ भने पूरा भइसकेका प्रत्येक चरणका मतदानबाट मोदी औडाहाग्रस्त भइरहनु भएको छ, त्यसैले ब्युहरचना व्यर्थ भएको जस्तो हुनुभएको छ । सीमापार हवाई हमलाको बारेमा एक अन्तरवार्तामा उहाँको टिप्पणी हतास मानसिकताको उदाहरणका रुपमा लिइन्छ ।
त्यसो त विपक्ष भाग्नेको समुह हो । कांग्रेसले केरलामा सम्भावित सहकर्मी बामपन्थीहरूलाई उपेक्षा गर्दैछ र बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा समेत निशाना बनाइरहेको छ । दिल्लीमा कांग्रेस र आम आद्मी पार्टीले एक अर्कालाई यति भित्रैसम्म लतारेका छन् कि यी दुवै मोदीबिरूद्ध सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । केरलामा राहुल गान्धीले बामपन्थीहरू बिरुद्ध कार्यभार लिएका छन् ।
मोदीले स्पष्ट रुपमा आफ्ना हडबडाहटलाई नजरअन्दाज गर्न वायुसेनालाई भन्नुभयो कि उडानको दिन अचानक बादलले ढाक्ने परिस्थितिले आक्रमणलाई ब्यवधान पु¥याउँछ । हवाई आक्रमणको दिन परिवर्तनका लागि उहाँलाई अनुरोध गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, बादलले भारतीय विमानहरूलाई दुश्मनका राडार छल्न मद्दत हुनसक्छ । व्यंग्यचित्रकारको एउटा फिल्डको दिन थियो । एकजनाले देखाए, मोदी विमानस्थलमा एक वायुसेनाको विमानको ककपिटमा बस्नुभएको छ, भन्दै हुनुहुन्छ :- सडकबाटै जाऔं । उनीहरूले हामीलाई कुनै बस ठान्नेछन् ।
अर्कातिर विपक्षी खेमामा पनि हतासा हावी भइरहेको छ । उनीहरूले यो निर्वाचनमा जित्न सकेनन् भने सबै नभए पनि उनीहरूमध्ये धेरैको सर्वनाश हुनसक्छ । त्यसैले यस निर्वाचनमा उनीहरूले आफ्नो खटनद्वारा सम्पूर्ण साधन–स्रोत खन्याएर पनि मोदीलाई पराजित गर्नैपर्छ ।
त्यसो त विपक्ष भग्न समुह हो । कांग्रेसले केरलामा सम्भावित सहकर्मी बामपन्थीहरूलाई उपेक्षा गर्दैछ र बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा समेत निशाना बनाइरहेको छ । दिल्लीमा कांग्रेस र आम आद्मी पार्टीले एक अर्कालाई यति भित्रैसम्म लतारेका छन् कि यी दुवै मोदीबिरूद्ध सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । केरलामा राहुल गान्धीले बामपन्थीहरू बिरुद्ध कार्यभार लिएका छन् ।
यदि निर्वाचनपछि धार्मिक फासीवाद यो वा त्यो कारणले उल्झनमा प¥यो भने के कम्युनिस्टहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई एउटा अर्को मौका मिल्ला त ? कि उनीहरू अझ उत्तम योजनाउपर काम गर्नका लागि भूमिगत होलान्, जसले उनीहरूलाई वर्तमान मार्गसम्म ल्यायो, अथवा उनीहरू पाकिस्तानमा अयुब र जियाका पालामा आफ्नै सहधर्मीहरूका बीच भएजस्तो पहिचान बदलेर छरपस्ट होलान् ?
राहुल गान्धीले आफूलाई प्रधानमन्त्री दावेदारका रुपमा खडा नगरी उत्तर प्रदेशको उपनिर्वाचनमा मायावतीले अखिलेश यादव (र आफैं) लाई सहयोग गर्न आफू पछाडि हटे जसरी शुरूदेखि नै यस खेलउपर नियन्त्रण राख्न सक्नुहुन्थ्यो । मायावती नै त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले एकै झट्कामा कांग्रेसलाई मध्यप्रदेश र राजस्थानमा सरकार बनाउने अवसरका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएर तथा विपक्ष र देशलाई नै ऊर्जा भर्ने काम गर्नुभयो ।
उहाँको समर्थनबिना अमेठीमा राहुललाई संघर्ष गरिरहनु पर्नेथियो । यो हो सौहार्दता । गान्धीले सँधैका महत्वाकांक्षी सहकर्मीहरूको इच्छालाई स्वीकार गर्नुको सट्टा पछाडि बसेर गठबन्धनको रखवालीको भूमिका निर्वाह गरेको भए अनेकौं वरदान हासिल गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको घोषणापत्रमा विपक्षलाई एकजूट गराउने सबै कुरा थियो, उहाँको सम्पर्कमा आइरहेका क्षेत्रीय समुहहरूको एउटा गठबन्धन हुनेथियो, जस्तो कि उहाँ ती नेताहरूसँग गर्नुहुन्थ्यो, जसले उहाँभन्दा अघि मध्यस्थताको खोजी गरेका थिएनन् ।
टुटे फुटेका विपक्षीहरूलाई एउटा राम्रो समाचार के छ भने सन् २०१४ को चुनावका तथ्याङ्क उनीहरूका लागि उपयोगी सिद्ध हुनेछ । मोदीका लागि राम्रो समाचार के छ भने चुनाव आयोगले मतदान यन्त्रहरूलाई पारदर्शी नबनाउने आफ्नो वाचा राखेको छ, जस्तो कि विपक्ष त्यही चाहन्थ्यो । अर्को शब्दमा मोदीको समर्थनमा २०१४ को जस्तो लहर २०१९ मा हुनसक्दैन ।
उदाहरणका लागि उत्तर प्रदेशमा सन् २०१४ र २०१७ को विधानसभा निर्वाचनको मत विपक्षी दललाई गएको थियो र त्यसपछिका तीन उपचुनावमा भाजपा परास्त भएको थियो, विपक्षसँगै कायम रहने कुरामा सहमत हुन सकिन्छ त ? यदि त्यसै हो भने भाजपाले सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको यस राज्यमा धक्का ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिम बंगाल, जहाँ भाजपाले हिन्दीभाषी क्षेत्रमा भएको क्षतिको परिपूर्ति गर्ने आशा गरेको छ, कम्युनिस्ट नेतृत्वको बाममोर्चाको चञ्चल मतमा धेरै निर्भर रहन्छ ।
द टाइम्स् अफ इन्डिया भन्छ, भाजपाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूबाट सहयोग पाइरहेको छ, जो ममता बनर्जी र कम्युनिस्ट शुभचिन्तकका लागि कठिनाई उत्पन्न गर्ने काम हुनेछ ।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राज्यमा भएका चुनावी ¥यालीका क्रममा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बनर्जीको तुलनामा कम्युनिस्ट बढी सहमतिउन्मुख छन् । के मृत्युको चुम्बनले मोदी पदहिन हुँदा विपक्षीहरूको अवसरलाई क्षति पुग्छ ? सन् २०१४ मा पश्चिम बंगालमा भाजपालाई १७ प्रतिशत मत प्राप्त थियो, जसमा २०१६ को विधानसभाको चुनावमा घटेर १० प्रतिशत पु¥याइदिए । मोदीलाई बनर्जीको ४६ प्रतिशत मत हत्याउन २५ देखि ३५ प्रतिशतको बृद्धिको आवश्यकता पर्दछ ।
समाचार रिपोर्टमा भनिएजस्तै के बामपन्थीले दक्षिणपन्थीलाई अनुगृहित बनाउला ? के एक धर्मनिरपेक्ष विरोधी भनी निन्दितको घृणा फाँसीवादको भयभन्दा गहिरो छ ? जोसुकैले अपेक्षा गर्छ, यस्ता समाचार रिपोर्टहरू झुटा सामग्रीमा आधारित छन् र बामपन्थीहरूले मोदीबिरुद्ध लड्नका लागि आफनो प्रतिबद्धता छोडेका छैनन् यद्यपि क्षेत्रीय तहमा उनीहरूले नरुचाउने पक्षसँगको मतान्तर यथावत होस् । भाजपालाई बामपन्थीहरूबाट कथित समर्थन झुटो खबरजस्तो लाग्छ ।
न मोदी न अमित शाह नै प्रहरी अधिकृत सञ्जीव भट्टलाई जेलबाट रिहा गर्न चाहनुहुन्छ । उहाँ गुजरातका धेरै छली चिजबारे जानकार हुनुहुन्छ । उहाँ न्यायाधीश लोयाको रहस्यमय मृत्यु र राफेल सौदामा भाजपालाई पछार्नका लागि एक नयाँ जाँच शुरू गर्न चाहनुहुन्छ । दुवै पक्ष घमासान लडाई लड्दै हुनुहुन्छ । एउटा बाघको सवारीमा छन् । अर्को पक्ष जनाबरको सामना गर्दै हुनुहुन्छ ।
भाजपाले उडिसाबाट पनि लाभको अपेक्षा गरिरहेको छ, जहाँ नवीन पटनायकको नेतृत्ववाला सत्तारुढ पार्टीले सन् २०१४ को चुनावमा २१ लोकसभा र ११७ विधानसभा सिटमध्ये २० सिट कब्जा गर्नुभएर आफ्नो मत वितरणमा ठूलो उछाल कायम गर्नुभयो । के उडिसा भाजपालाई पछारेर राष्ट्रिय प्रवृत्तिलाई घाटा जताउला, जसको मत शेयर पटनायकको पार्टीको आधा हिस्साको वरिपरि थियो ? अमित शाहको भनाई छ, उहाँ पश्चिम बंगालमा २३ र उडिसामा १२ देखि १५ सिटसम्म जित्नसक्नु हुन्छ । यस्तो दृढ दावीले गर्दा विपक्षी दलहरूलाई मतदान यन्त्रको बारेमा शंकाको बेचैनतिर धकेलेको छ ।
महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान र मध्यप्रदेशले २०१४ मा मोदीलाई प्रचूर समर्थन दिएका थिए । के उहाँले योभन्दा राम्रो अवस्था पाउनु होला ? मत बढ्ने कल्पना गर्न कठिन छ । के दक्षिणका राज्य मोदीलाई अँगाल्न तयार छन् ? जित्ने ब्यग्रता दुवैका लागि यसको कारण हो ।
(लेखक पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने अँग्रेजी दैनिक ‘डन’ का लागि दिल्लीबाट लेख्नुहुन्छ । उहाँ नाम चलेका भारतीय पत्रपत्रिका र टीभीका लागि पनि लेख्नुहुन्छ । प्रस्तुत लेख The desperation on both sides प्रस्तुत लेख ‘डान ‘मा मई १४, २०१९ मा प्रकाशित भएको थियो ।)